घरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो आशंका ब्यक्त गरेकी रहिछन् भागीरथिले -
Home News घरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो आशंका ब्यक्त गरेकी रहिछन् भागीरथिले
घरबाट निस्किन्दै गर्दा आमासँग अंगोलामा बेरिँदै यस्तो आशंका ब्यक्त गरेकी रहिछन् भागीरथिले
बैतडी । घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एकोहोरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ । छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको सहनै नसक्ने पि’डा । यिनी हुन् स्कूलबाट अहिलेकी चर्चित दुखद घटनाकी पात्र भागरथीकी आमा । जस्को आखाँबाट बर्रर आँशु झरि रहेको छ तर पुच्छ्ने हेक्का भने छैन ।
पि’डामाथि पि’डा सहुन् पनि कसरी ? श्रीमानको मृत्यु भएको २ महिना पनि पुरा भएको थिएन । फेरी जवान र होनहार छोरी गईन् अल्पआयुमै । यी एकल आमाको काख र कोखबाट खोसिदिए पापीहरुले । सन्तानलाई सानो चो’ट मात्रै लाग्दा त त्यसको दुखाई आमाबुवालाई हुन्छ भने भागरथी त अकाल्मै यो संसारबाटै आफ्नी आमालाई सदाकालागी छाडेर गएकी छन् । छोरी अब यो संसारमा कहिल्यै नर्फकने गरी गएको खबरले यी आमाको मन दुखेको छ होला ? कति छ’टपटि’एको छ होला ? यो कुराको अनुभुति केवल उनैले मात्र गर्न सकेकी छन् ।
छोरी अझैंपनि कतैबाट आमाभन्दै बोलाउँदै आउँछे कि भन्ने उनलाई कति लागेको हुँदो हो । तर अब त्यो कहाँ सम्भव छ र ? दैव पनि कति निष्ठुरी हुँदा रहेछन् भन्ने भनाई यतिबेला भागरथीकी आमाको जीवनमा लागु भई दिएको छ । बहीनी भागरथीलाई सम्झंदै रसाएका दाईका आखाँले बहीनी गुमाउँदा उनको मनमा फु’टेको ज्वारभाटालाई प्रष्ट देखाउँछ । बुवाको निधनपछि घरको जिम्मेवारी उनीमाथी आई लागेको हुनाले काम गर्न र आर्थिक कुरालाई माथि उठाउन उनी भारत गएका थिए ।
जब बहीनी भागरथीको बारेमा उनले थाहा पाए तब उनी भारतबाट घरमा आएका छन् । बहीनीलाई सम्झिंदै उनी भन्छन्,‘म हिंड्ने बेला मैले बहीनीलाई भनेको थिएँ । बुवापनि हुनुहुन्न । मपनि इण्डिया कमाउन जाँदैछुु । आमाको र आफ्नो ख्याल राख्नु र राम्रोसंग पढ्नु ।’ बहीनीसंग भएको यही सम्बादलाई सम्झिंदै भक्कानिए भाथरथीका दाई । आमाको साहारा नै तिमी हौ भन्दै आमालाई बहीनीको जिम्मा लागएका दाईले जब यो कुरा अर्काको देशमा काम गर्दै गर्दा थाहा पाए तब उनीमाथि के बितेको थियो होला त्यो कसैले महसुस सम्म गर्न सक्दैन । भिडियोसहित
Previous articleमञ्जुलाई भगाएर बे*पत्ता भएका दिपक कि श्री*मती रुदै मिडियामा, कतारबाट एक्कासी नेपाल आई रा*तारात भगाए
Next articleवडा अध्यक्ष प*क्राउ | के प्रे’मिकालाई मा*रेकै हुन् त ? यस्तो छ घट’नाको वास्तविकता हेर्नुहोस् Kailai News